Xaaladda ka taagan Itoobbiya: Maxaa hortaagan in gargaarku gaadho Tigray | Somalilandhorta
Browse: Home / Xaaladda ka taagan Itoobbiya: Maxaa hortaagan in gargaarku gaadho Tigray
Posted by Yasmin Ahmed on August 1, 2021 in Warar | 8 Views | Leave a response
Family with food aid in MekekkeXIGASHADA SAWIRKA,GETTY IMAGES
Hay’adda Cunnada Adduunka (WFP) ayaa sheegtay inay ka dhammaatay kaydkii raashinka gargaarka ahaa ee u yaallay gobolka Woqooyiga Itoobiya ee Tigray.
Dagaallada soo cusboonaaday ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Tigreega, iyo xiritaanka waddooyinka muhiimka ah ee gaadiidka ayaa si weyn u carqaladeeyay safrinta gargaarka.
QM ayaa sheegtay in in ka badan shan milyan oo qof ay aad ugu baahan yihiin gargaar bani’aadamnimo gobolka.
Meelahee ayaanu gargaarku marayn?
Gargaarkii la gaadhsiin lahaa Tigray -ga ayaa ahaa mid aad u dhib badan dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, in kasta oo baahi deg -deg ah ay ka jirtay deegannadaas.
Waxa ay daba socotaa dagaal siddeed bilood socday oo dhiig badan ku daatay oo u dhexeeyey ciidanka Itoobiya iyo Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray-ga (TPLF) si ay u qabsadaan gobolka Tigray.
map of Tigray showing limited access for humanitarian supplies
Hadda dagaalku wuxuu ku sii fiday gobolka Cafar ee deriska la ah ee ka xiga bariga, isagoo halis geliyay mid ka mid ah marinnada muhiimka ah ee soo gala Tigreega.
Tobanaan kun ayaa ku barokacay qalalaasihii ugu dambeeyay, taasoo ka dhigaysa baahida loo qabo taageero bani’aadamnimo mid degdeg ah.
Waxaa jira qaybo ka mid ah Tigray oo ay suurtogal tahay in wax la gaarsiiyo dadka u baahan – gaar ahaan meelaha hadda xasilloon oo ay ka taliyaan TPLF. QM waxay ku qiyaastay in guud ahaan, 75% dadka xaaladoodu cakiran tahay ee Tigray ay hadda gaari karaan; bishii May, tiradaasi waxay ahayd 30% oo kaliya.
Laakiin QM ayaa sidoo kale ka digaysa in “kaydku si xawli ah u baaba’ayo” xitaa meelahaas, iyada oo marin -u -heliddu aad uga fog tahay.Kolonyadii gargaarka ee ugu dambaysay ee si guul leh ku gaadhay magaalo madaxda gobolka ee Mekelle waxay ahayd 12 -kii July “maalmo ka dib markii ay soo mareen jid -gooyooyin”, ayay sheegtay Qaramada Midoobay.
Kani wuxuu ahaa safarka kaliya eee gaadhay Tigray bishii July oo dhan.
Joojinta safarrada gargaarka
5tii Julaay, dawladdu waxay ku dhawaaqday inay oggolaan doonto duulimaadyada bani’aadamnimada.
Si kastaba ha ahaatee, waxay dejisay kontaroolo adag – oo ay ku jirto shuruud ah in dhammaan duulimaadyadu ay marka hore ka soo degaan caasimadda Itoobiya, Addis Ababa, si loo baaro.
Illaa iyo hadda, duullimaadyadan waxaa ku jiray tiro kooban oo shaqaale samafal ah laakiin kuma jirin gargaar cunto.
Jidadka berriga ayaa sidoo kale aad loo xaddiday.
Dhanka koonfureed, ciidamada taageersan dawladda ee gobolka Amxaarada ayaa ka hortagayay in sahaydu soo marto. Kolonyo 29 baabuur ah oo siday gargaar WFP ayaa lagu qasbay inay dib u laabtaan 29-kii June, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Waxa kale oo aan suurtogal ahayn in gargaar lagu keeno waddo ka timaadda Suudaan, oo la geliyo galbeedka Tigray, oo ah meel ay gacanta ku hayaan kooxaha taageera dawladda Itoobiya.
WFP trucks parked at a checkpoint along the Amhara and Tigray regions border
Illaa dhowaan, dariiqa kaliya ee dhulka ee la marin karo ayaa ahaa bariga Tigray, iyadoo kolonyo ay ka soo galeen gobolka Canfarta ee Itoobiya.
Si kastaba ha ahaatee, iyadoo dagaalladii ugu dambeeyay ay ku soo qulqulayeen Canfarta, waddadani hadda halis bay ku jirtaa.
WFP waxay hakisay dhaqdhaqaaqii kolonyo ka timid Canfarta oo ku sii jeeday Tigray ka dib markii kolonyo 10 baabuur ah la weeraray 18kii Luulyo. Ma cadda cidda geysatay weerarka, laakiin dadka wax indha-indheeya ayaa soo jeedinaya in ay mas’uul ka yihiin maleeshiyada dowladda taageersan.
Billene Seyoum, oo ah afhayeenka ra’iisul wasaaraha Itoobiya, ayaa BBC -da u sheegtay in “kuwa aan loo baahnayn in loo tixgeliyo ‘xannibaadyo maaddaama ay dowladdu ku qasban tahay inay si isku mid ah u sugto amniga”.
Ra’iisal wasaare Abiy Ahmed ayaa ku eedeeyey TPLF curyaaminta adeegyada gargaarka
Arrintan ayaa timid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Ridwan Xuseen uu ku eedeeyay ururro samafal oo aan la cayimin inay ka shaqeynayaan sidii ay u hubeyn lahaayeen kooxda TPLF, isagoo ku andacoonaya in dowladda ay qabatay iyagoo hub iyo qalab siinaya jabhadaha.
Dhakhaatiirta Aan Xudduudda Lahayn (MSF) ayaa sheegaysa in bayaannada dadweynaha ee tuhunka geliya hawlaha hay’adaha gargaarka ay halis ku yihiin ammaanka shaqaalaheeda iyo bukaannadooda.
QM ayaa sheegtay in 12 ka mid ah shaqaalaha gargaarka lagu dilay gobolka tan iyo markii uu dagaalku billowday bishii November ee sannadkii hore.
Hawlgalka gargaarka caalamiga ah ayaa sidoo kale wajahaya caqabado maaliyadeed oo aad u daran. Qaramada Midoobay waxay ku qiyaastay inay u baahan tahay $ 435 milyan oo maaliyad dheeri ah inta u dhexeysa hadda iyo Diseembar 2021.
Qaybo badan oo gobolka ka mid ah ayaa ka go’ay isgaarsiintii oo koronto la’aan ah, taasoo saameyn ku yeelatay adeegyadii muhiimka ahaa.
Historic night’ as Somalia screens first film in 30 years→
Maraykanka Oo Ka Hadlay Aqoonsiga Taiwan Ee Somaliland→